कांग्रेसलाई सत्ताको रहर- तर जसपा फुट्ने, एमाले नफुट्ने डर – Nepal Press
कांग्रेसलाई सत्ताको रहर- तर जसपा फुट्ने, एमाले नफुट्ने डर
२०७७ चैत ६ गते ९:४५
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सम्भावित सत्ता समीकरणबारे आफ्नो प्रष्ट धारणा बनाइसकेको छैन । कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा नयाँ समीकरणका लागि परिस्थिति परिपक्व हुने प्रतीक्षामा छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि अग्रसरता लिनुपर्ने पक्षमा छन् । कांग्रेसको औपचारीक बैठक नबसेकोले नेताहरुले पार्टीको संस्थागत धारणा बोल्न सकिरहेका छैनन् ।
सभापति देउवालाई विपक्षी गठबन्धन बनाएर सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पार्टीभित्र र बाहिर दवाव बढ्दो छ । तर संसदमा बहुमत सुनिश्चत नदेख्दासम्म अविश्वास प्रस्तावको अगुवाई गर्न देउवा तयार छैनन् । देउवा निकट नेताहरु अविश्वास प्रस्तावमा बहुमत जुट्ने निश्चित भइनसकेको बताउँछन् ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा कांग्रेसले ‘उचित समयमा उपयुक्त निर्णय’ लिने बताउँछन् । नयाँ सरकार गठनको विषय कांग्रेसको ईच्छा शक्तिबाट मात्रै पूरा नहुने भएकोले उपयुक्त समयको पर्खाई रहेको बताउँछन् ।
‘बाहिर भनिएजस्तो कांग्रेस न अनिर्णित छ न अलमलमा छ । सरकार गठनको विषय जति गम्भीर हो हामी त्योभन्दा गम्भीर छौं । उपयुक्त समयमा कदम चाल्नेछौं’, शर्माले नेपाल प्रेससँग भने । उनले संसदमा रहेको दलीय अंकगणित नबुझी कांग्रेसलाई लाञ्छना लगाउनु उपयुक्त नहुने बताए ।
‘एमालेको विवादले कुन रुप लिने हो ? जसपा फुटेर पो ओलीसंग जान्छ कि ? यस्ता धेरै प्रश्नहरुको निधो हुन बाँकी छ । त्यसैले कांग्रेसले हतार नगरेको हो’, कांग्रेस नेता डा. नारायण खड्काले नेपाल प्रेससँग भने ।
‘मुख्य विपक्षी त कांग्रेस हो नि । उसले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने हिम्मत गरोस् । जसपाले त्यसमा समर्थन गर्छ’, झाले भने । जसपाले राखेका एजेण्डाबारे कांग्रेसले छलफलसम्म नगर्नुले कांग्रेस के चाहन्छ भन्ने प्रष्ट देखिएको झाले बताए ।
तर जसपाकै एक शीर्ष नेताले भने जसपा नफुट्ने र उपेन्द्र बाबुरामको लाइन पनि पारित नहुने दावी गरे । एमालेका सांसदले फ्लोर क्रस गरेर केपी ओलीलाई मत नदिने अवस्था आउन सक्ने डर जसपाका नेताहरुलाई छ । यदि ओलीले एमालेका १२० जना सांसदलाई एक ठाउँमा राख्न सके भने जसपा अ‍ोलीको पक्षमा उभिने ती नेताको भनाइ छ ।
प्रकाशित: २०७७ चैत ६ गते ९:४५